Hery Rajaonarimampianina : “Manana andraikitra hampanjaka ny fandriam-pahalemana ” -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : “Manana andraikitra hampanjaka ny fandriam-pahalemana ”
Hery Rajaonarimampianina : “Manana andraikitra hampanjaka ny fandriam-pahalemana ”
30/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tonga nanome voninahitra sy nitarika ny lanonana “Fandresena 2018”, ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, ny sabotsy 28 jolay lasa teo. Lanonana izay famoahana mpianatra miaramila manamboninahitra eo anivon’ny Akademia miaramila, ao Antsirabe. Ho an’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, sady filoha fara-tampon’ny foloalindahy dia nomarihiny ny maha zava-dehibe ny famoahana mpianatra ao amin’ny Akademia miaramila tahaka izao, satria manana andraikitra lehibe eo amin’ny fiarovana ny tanindrazana izy ireo, indrindra eo amin’ny fampandriana ny fahalemana, ary karazan’ady maro samihafa no mila atrehin’ireto manamboninahitra vaovao ireto. Nambara izany nandritra ny fandraisany fitenenana. “Andro lehibe ho an’ny mpitandro filaminana malagasy ny andro androany. Adidy lehibe ny fanotronana lanonana tahaka izao satria manamarika ny fitiavan-tanindrazana ho anareo manamboninahitra vaovao izay vao nivoaka, izay nahazo fampianarana mitaky fahiratan-tsaina, hery ary herim-po. Miasa amin’ny maha-manamboninahitra ianareo izao. Voninahitra lehibe izany satria nandresy ianareo. Fandresena izany », hoy ny Filoha nanafatra ireo manamboninahitra vaovao ireto.
Ny soatoavina irian’ny Filoham-pirenena koa ny hisaloran’ireto manamboninahitra vaovao ireto ny tena fitiavan-tanindrazana hisian’ny Fisandratana. “Ankalazaintsika isan-taona eto ny fandresena mba hanatrarana ny tanjona hiadiana amin’ny fahantrana, indrindra ny fahantran’ny toe-tsaina, ny kolikoly, miantoka ny fiarovana ny mponina, ny ady amin’ny fitsaram-bahoaka, izay lasa aretina mampikatso ny fampandrosoana. Izay anton’izay no nahatonga ny filoha nisafidy ny Fisandratana mba hiresahana ny fahaterahana ny soatoavina ara-moraly, mba hiainana ao anatin’ny kolontsain’ny fisandratana, ary anatin’ny fitiavan-tanindrazana », hoy ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery. Manoloana ireo manamboninahitra vaovao, nanambara ny Filoha fa, « mila lehilahy vaovao ny ekipam-pirenena, ekipa vaovao tahaka anao, hahatratra ny tanjon’ny Fisandratana. Tafiditra amin’izany ny fandalana ny fihavanana, ny kolontsaintsika, ny tontolo iainana ary indrindra ny fiombonana sy ny firahalahiana. Tahaka ireo olom-pirenena rehetra, manana andraikitra koa ianao hanaja ny fahamarinana, ny fandriam-pahalemana ary ny fitoniana. Tokony hiombona isika hanangana firenena iray maoderina sy miroborobo.»
http://www.4xforum.co.za/ dans Fanafihana kamiao tao Ambositra-VOAROBA NY 100 TAPITRISA ARIARY
Jeneraly Paza Didier : “Roahina avy hatrany ireo zandary mandika lalàna”
Jeneraly Paza Didier. Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (SEG). Nitondra famelaberana mikasika ny adidin’ny zandary eto amin’ny firenena. Nambarany fa roahina avy hatrany ireo zandary tratra mandika lalàna. Voalaza ihany koa fa tsy misy intsony izany ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : Atokisan’ny Japoney
Malik Sarr : « Vonona hanampy ny Malagasy ny Oif”
Avara-pianarana : Tsy mila « putschiste »
http://www.4xforum.co.za/: Finding this site... Wow, this post is good and very informative.